Last Empire အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် XAPK（213.0MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Last Empire - War Z: Strategy
World BOSS သည်မီးကိုအာရုံစူးစိုက်ပါစေ! လာပါ။ လူအစုအဝေးကိုစုရုံးပါ။ နောက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးအင်ပါယာတွင်သင်၏အရင်းအမြစ်များကိုခိုးယူလိုသောဖုတ်ကောင်စစ်တပ်အားသေနတ်ဖြင့်ပစ်။ တိုက်ခိုက်ခြင်းအားဖြင့်သင်၏အင်ပါယာကိုကာကွယ်ပါ - War Z - မဟာဗျူဟာဆိုင်ရာ RPG နှင့်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတည်ဆောက်ခြင်း။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှအခြားကစားသမားများနှင့်အတူစစ်တပ်တည်ဆောက်နှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဖုတ်ကောင်စစ်တပ်နှင့်အတူတစ် ဦး တိုက်ခိုက်စီစဉ်! ဖုတ်ကောင်နှင့်လူ့ရန်သူများကိုတိုက်ခိုက်ရန်သင်၏နိုင်ငံကိုတည်ဆောက်ပြီးအင်ပါယာမဟာမိတ်များနှင့်မိတ်ဖွဲ့ပါ။ မင်းမှာအင်အားအကောင်းဆုံးတပ်မှူးဖြစ်ဖို့ဘာတွေရှိသလဲ။
နောက်ဆုံးအင်ပါယာ - War Z သည်ဖုတ်ကောင်များနှင့်တိုက်ရိုက်ကစားနိုင်သောစစ်မဟာဗျူဟာဂိမ်းဖြစ်သည်။ လာမည့်ဖုတ်ကောင်စစ်ပွဲမှသင်၏အင်ပါယာကိုကာကွယ်ရန်ဖုတ်ကောင်တပ်များနှင့်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများကိုတိုက်ခိုက်ပါ။ သင့်အားဖုတ်ကောင်ကာကွယ်ရေးမဟာဗျူဟာတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အထူးဖြစ်ရပ်များတွင်ပါ ၀ င်ခြင်း၊ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောဖုတ်ကောင်စစ်ဆင်ရေးတွင်ပါ ၀ င်ပြီးသင်၏အင်ပါယာကိုကြီးထွားရန်စစ်တပ်ကိုတည်ဆောက်ပါ။ နောက်ဆုံးအင်ပါယာရှိ Zombie Apocalypse ကိုဆက်လက်ရှင်သန်နေပါရန် - War Z!
နောက်ဆုံးအင်ပါယာ - War Z ထူးခြားချက်များ:
* အင်ပါယာတည်ဆောက်ရေးဂိမ်းများ - ကစားသမားများကိုအတူတကွလုပ်ဆောင်ရန်နှင့်အားကောင်းသောဆုကြေးငွေများရရှိရန်အားပေးသည့်အခြေစိုက်စခန်းတည်ဆောက်ခြင်းနည်းဗျူဟာ!
* ဖုတ်ကောင်ကာကွယ်ရေးတည်ဆောက်ခြင်း ဂိမ်းများနှင့်ပွဲများနှင့်အသက်ရှင်လွတ်မြောက်လာသူများအတွက်ကြီးမားသောအကျိုးကျေးဇူးများအတွက်ဗျူဟာနည်းဗျူဟာ။
ဖုတ်ကောင်ကျိုးပဲ့နေစဉ်အတွင်းဖုတ်ကောင်စစ်သားများနှင့်အခြားကျန်ရစ်သူများကိုတိုက်ခိုက်ခြင်း။ ကမ္ဘာ့မြေပုံပေါ်တွင်ကမ္ဘာတစ်လွှားရှိမဟာမိတ်အဖွဲ့ ၀ င်များနှင့်စကားပြောပါ။ * အင်ပါယာမဟာမိတ်များသည်သင်၏အင်ပါယာကိုချဲ့ထွင်ရန်အတွက်ဖုတ်ကောင်တပ်ဖွဲ့များနှင့်အခြားအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများအားဖျက်ဆီးရန်မင်းနှင့်အတူစစ်တိုက်ခြင်း။
ဖုတ်ကောင်နှင့်လူ့တပ်များနှင့်အတူစစ်တပ်တည်ဆောက်ခြင်း။ * သင်၏ရန်သူများကို ဖျက်ဆီး၍ သင်၏အင်ပါယာကိုကာကွယ်ရန်သေစေနိုင်သောဖုတ်ကောင်စစ်တပ်တစ်ခုတည်ဆောက်ပါ။
* Zombie apocal အသက်မသေဘဲကျန်ရစ်သူကိုထူးခြားသောစစ်စွမ်းရည်နှင့်မဟာဗျူဟာဖြင့်စုဆောင်းနိုင်သည်။
* နည်းဗျူဟာသည်အရာအားလုံးဖြစ်သည်။ မတူကွဲပြားသောစွမ်းရည်သစ်ပင်များသည်ကစားသမားများအားသူတို့၏သူရဲကောင်းများကိုမြှင့်တင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
ဖုတ်ကောင်များ၏စစ်တပ်ကိုတည်ဆောက်ခြင်း၊ ဖုတ်ကောင်မှဖြတ်သန်းခြင်းမှလွတ်မြောက်ရန်တိုက်ပွဲ ၀ င်ခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးအင်ပါယာရှိ War Z Z ကိုကာကွယ်ရန်အင်ပါယာကိုကာကွယ်ပါ။
မှတ်ချက်ပေးပါ။ နောက်ဆုံးအင်ပါယာ - War Z သည်အခမဲ့ဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်နိုင်သည်။ သို့သော်ဂိမ်းပစ္စည်းအချို့ကိုငွေအမှန်ဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်သည်။ ဤအင်္ဂါရပ်ကိုသင်အသုံးမပြုလိုပါကသင်၏ကိရိယာ၏ဆက်တင်အတွင်းမှအက်ပလီကေးရှင်းဝယ်ယူမှုကိုပိတ်ပါ။ ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုလိုအပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပေါ်လစီအရ၊ နောက်ဆုံးအင်ပါယာ - War Z သည်အသက် ၁၂ နှစ်နှင့်အထက်လူများအတွက်သာဒေါင်းလုပ် လုပ်၍ ကစားနိုင်သည်။
Last Empire-War z fusion suits
အရမ်းသတိယနေပါတယ် state 1 ကို အဲ့ကတည်းက စဆော့ဖူးခဲ့တာပါ မြန်မာအဖွဲ့ MMR စတိတ်ရဲ့ ဘုရင်တွေ မဇာ. ကိုတီ.ကိုညို. ဝင်းသူ တို့ရေ
ì am playing in state 737
Su Lae May Su Lae May
တွဲဆော့ရအောင်လေ မဆော့တတ်လို့ပါ နည်းသိရင်ပြောပြ ပေးပါ
John San Lisa